12 Tsy misy fomba Bullsh * t hiaina fiainana mahaliana sy manaitaitra kokoa - Blog
12 Tsy misy fomba Bullsh * t hiaina fiainana mahaliana sy manaitaitra kokoa
Ny fiainanao dia tsy hoe ilay tena antsoinao hoe manaitaitra. Somary monotonous sy vinavina ny zavatra rehetra, ary tsy mahavita anao ny fomba fiainanao.
Somary mankaleo anao daholo izany.
Tsy voatery mieritreritra mamerina mamerina ny tenanao tanteraka ianao na manova ny fiainanao mihoatra ny ekena rehetra.
Saingy mila tsindrona fahalianana sy fientanam-po ianao mba handroahana ny mankaleo.
Ianao dia te raiso ny fiainanao ary tena miaina izany, fa tsy mipetraka fotsiny ary mamela ny fiainana hitranga aminao.
Te hanana traikefa vaovao ianao ary hanao fahatsiarovana vitsivitsy.
Ary tsara izany. Iray monja no azontsika tamin'ity zavatra antsoina hoe fiainana ity, ka mahafinaritra anao ny manomboka manararaotra azy indrindra.
Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy handefasana ny fiainanao.
1. Miala tsy tapaka amin'ny faritra mampionona anao.
Ny faritra mampionona dia mahatsiaro ho voaro, mafana, milamina ary, tsara… mahazo aina. Tsara toerana ry zareo. Saingy mety hahatsapa ho teritery sy mankaleo koa izy ireo indraindray. Ary ny fijanonana ao anaty iray dia mety hidika hoe tsy manana ny tsinay handray risika ianao.
Ny tena izy, zavatra mahaliana dia mety hitranga aminao rehefa miala amin'ny faritra mampionona anao ianao, na dia mivoaka ny oronao fotsiny aza ianao.
Manaova fifanarahana amin'ny tenanao fa hanao zavatra izay hitondra anao hiala ny faritra mampionona anao farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro, na dia toa tsy misy dikany aza izany zavatra izany.
Na ny zavatra madinidinika toa ny fanaovana resadresaka amin'ny olon-tsy fantatra aza dia mety ho ampy hahatonga ny fiainana ho mahaliana sy miovaova kely kokoa.
Atombohy amin'ny fikarohana ny faritra manodidina ny faritra mampionona anao. Rehefa mihalehibe ny faritra mampionona anao dia hatoky tena kokoa ianao hanosika ny tenanao hitombo hatrany.
2. Mametraha fanamby amin'ny tenanao.
Raha te-hampifangaro zavatra ianao fa mila antony manosika kely, ny fametrahana tanjona sy fanamby kely dia mety ho fomba iray lehibe hahazoana vanim-potoana.
Mametraha fanamby isaky ny herinandro na isam-bolana, na mametraka tanjona lehibe mandritra ny taona mihitsy aza.
Hamarino fotsiny fa potehinao ireo tanjona goavambe ireo ary hazavao tsara ny dingana tokony hataonao mba hahatanteraka azy ireo, mba tsy ho diso tafahoatra ianao.
Ary tadidio ny hijerena ireo fanamby any ivelan'io faritra mampionona anao io - azo antoka fa mahafinaritra ny mihatsara kokoa amin'ny zavatra efa nataonao ary tena miavaka amin'izany, saingy tsy voatery hahatonga ny fiainanao hahaliana kokoa na mahaliana kokoa izany.
3. Mitadiava zava-mahaliana eo amin'ny tokonam-baravaranao.
Ny fiainana mahaliana sy mahaliana dia tsy tokony hiditra amin'ny dia iraisam-pirenena na fanatanjahantena tafahoatra. Misy dia mahafinaritra tokony hitranga na aiza na aiza no itodihanao.
Eritrereto ny faritra manodidina ny tranonao sy ny zavatra azonao atao izay mbola tsy nataonao taloha.
Misy trano fisakafoanana vaovao mbola tsy nandehananao izay manompo karazana nahandro hafakely izay mbola niainanao?
Misokatra ve ny rindrina fiakarana vaovao? Misy farihy azonao totofana ao anatiny, na eo antenatenan'ny ririnina aza?
Amin'ny alina mazava, azonao atao ve ny mamaky kintana amin'ny toerana akaiky anao? Sa mandehandeha amin'ny fahazavan'ny volana? Afaka manana BBQ ririnina ve ianao? Afo eny amoron-dranomasina?
Ho gaga ianao amin'ny fahafinaretana rehetra azonao atao sy ny zava-baovao rehetra azonao andramana nefa tsy mandeha lavitra mihitsy. Tsy mampaninona ahy ny filokana fa misy karazan-javatra rehetra ho hitanao ao anatin'ny radius 5 kilometatra fotsiny.
4. Aza mandeha amin'ny fiainana amin'ny autopilot.
Betsaka amintsika no meloka noho ny famafazana ny fiainana fotsiny nefa tsy nanatrika teo amin'izao fotoana izao, manahy ny amin'ny omaly na rahampitso ary tsy mifantoka amin'ny ankehitriny mihitsy.
Raha tsy minia mandany fotoana hijanonana sy hijerena ny manodidina anao ianao, dia mety tsy ho hitanao ireo karazan-javatra mahaliana sy manaitaitra izay mitranga aminao hatrany.
Makà teboka iray hampiverenana ny sainao ho amin'ny ankehitriny.
Ny mahatsikaritra ireo zavatra madinidinika toy ny vorona vorona na ny tsiron'ny sakafo dia mety hahatonga anao hankasitraka fa misy zavatra mahafinaritra tokoa mitranga manodidina anao amin'ny fotoana rehetra, na dia tsy dia mahita azy ireo aza ianao.
Mety ho hitanao fa manampy amin'ity lahatsoratra ity ity lahatsoratra ity: Tsiambaratelo 8 momba ny fiainana mitandrina
5. Mahazoa mamorona.
Mety hanana fanovana ny fananana outlet famoronana.
Manandrama fomba isan-karazany hanehoana ny fahaizanao mamorona, na amin'ny endrika fanoratana, fanjairana, fandokoana, fandihizana…
Afaka gaga ianao amin'ny valiny sy ny fahafinaretanao amin'ny fizotranao.
Omeo an'io zavatra noforonina io izay nahaliana anao foana ny fanandramana, ary aza avela hitazona anao ny tahotra sao tsy dia mahay zavatra loatra.
6. Mahaiza ‘mahaliana’ mahaliana.
Raha te hanana fiainana mahaliana ianao, ny dingana voalohany dia ny fahalianana amin'ny tontolo manodidina anao.
Mametraha fanontaniana. Mamaky boky. Mandehana any amin'ny tranombakoka. Mihainoa podcast. Manaova adihevitra. Araho ny olona mahaliana izay mieritreritra anao hafa amin'ny media sosialy.
Tsidiho ny toerana fizahan-tany izay lavitra ny lalana - angamba tsy mendrika ny Instagram fa angamba mahaliana kokoa noho izany.
Jereo ny manodidina anao ary aza maka fotsiny ny fomba itadiavana zavatra. Mametraha fanontaniana, fa tsy mandray azy ireo amin'ny lanjan'ny tarehy.
Tsy fantatrao izay mety ho hitanao.
7. Mianara zava-baovao.
Ny fiainana dia làlan-kizorana lava, saingy misy ny olona manadino izany.
Raha mankaleo ianao dia mety mila mianatra zava-baovao.
Na zavatra mavitrika toy ny fanatanjahan-tena, zavatra mamorona toy ny tanimanga, na mifototra amin'ny fandalinana, toa ny mianatra momba ny tantaran'ny firenenao na mianatra fiteny iray dia hampifaly ny fitiavanao mianatra.
Betsaka ny zavatra tokony hianarantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary raha tsy mahafantatra afa-tsy kely fotsiny ny zavatra fantatsika sy manolo-tena hanitatra ny saintsika, dia mety ho lasa helo iray mahaliana kokoa ny fiainantsika.
8. Lazao hoe eny ny zavatra.
Ny filazanao hoe eny amin'izao tontolo izao dia mety hitondra traikefa tsy mampino anao. Lazao hoe eny amin'ny fanasana. Ampio ny olona hivoaka. Miezaha ho azy .
Misokatra amin'ny traikefa vaovao. Ny hoe eny amin'ny zavatra vaovao dia tsy hahomby amin'ny fomba tonga lafatra foana, fa tena hampianatra anao zavatra be dia be izany ary mety hidika hoe manao zavatra mahatalanjona na mifanena amina olona mahaliana sasany.
9. Aza manao zavatra.
Halako ny mifanohitra amin'ny tenako, saingy misy lafiny roa amin'ny vola madinika foana.
Ny fitenenana hoe eny dia tsy miabo foana, indrindra raha midika izany fa manaparitaka tena loatra ianao, na raha tsy tena ao anatiny ny fonao.
Be dia be koa ny fahefana amin'ny filazanao hoe tsia amin'ireo zavatra tsy tianao atao ary mametraka fetra.
Izany dia afaka manafaka ny fotoana ilainao hivoahana any sy hanananao traikefa mahaliana sy mahafinaritra tadiavinao.
10. Misokatra amin'ny fisakaizana vaovao.
Ny olona lanintsika amin'ny ankamaroan'ny fotoanantsika dia afaka manao zavatra betsaka amin'ny famolavolana ny fiainantsika.
Tsy mila anao ny manapaka ny olona amin'ny fiainanao fotsiny satria tsy izy ireo no olona mahaliana indrindra eto an-tany, fa mety misy toerana ho an'ny fifandraisana vaovao sasany amin'ny fiainanao.
Misokatra amin'ny fihaonana amin'ny olona vaovao. Mandehana mandehandeha ary mitsiky, manaova resadresaka ifanaovana amin'ny olona ary mifankalazà fotsiny. Tsy fantatrao mihitsy izay mety hifanena aminao.
11. Mikaroha kolontsaina samihafa.
Ny fitsangatsanganana amin'ny toerana vaovao sy ny fanandramana fomba fiaina vaovao izay tena tsy mitovy amin'ny anao dia fomba tsara iray hahafinaritra ny fiainana.
Saingy tsy mila mandeha lavitra foana ianao hijery ireo kolontsaina samihafa. Ny ankamaroan'ny tanàna sy tanàna amin'izao fotoana izao dia kolontsaina marobe ary ireo vondrom-piarahamonina ireo dia hanana ny hetsika manokana azon'izy ireo idirana.
Angamba mankalaza fomban-drazana samy hafa izy ireo mandritra ny taona, na angamba misy singa amin'ny finoany na ara-panahy izay azonao ianarana bebe kokoa.
Tsy milaza izahay fa mila ataonao ho ampahany lehibe amin'ny fiainanao ireo zavatra ireo, fa amin'ny fizahana azy ireo sy ny fahazavanao ny tenanao dia azonao antoka fa manana traikefa mahaliana ianao.
12. Amboary ny fomba fisainanao.
Ny zava-misy dia, izay heverina ho zavatra mahaliana sy mahaliana dia resaka fomba fijery iray manontolo.
Mila misafidy safidy ianao mba hahaliana anao sy hientanentanana amin'ny fiainana. Raha manao izany ianao dia ho gaga amin'ny zavatra mahaliana sy manaitaitra maro manodidina anao tampoka.
Hamarino tsara fa noho ny antony marina no anaovanao azy.
Araka ny hitanao, ny fanaovana ny fiainanao hahaliana kely kokoa dia tsy mila sarotra na lafo.
Alao antoka fotsiny fa manao izany ho an'ny tenanao ianao. Raha faly amin'ny fiainanao ianao dia aza mahatsapa faneriterena hiaina izany amin'ny fomba hafa hanaitra ny olon-kafa.
Tena mila ao anatin'ny zavatra rehetra ataonao ny fonao, ary raha faly ianao amin'ny fisiana mangina sy ambany kokoa, aza avela hisy hahatonga anao hahatsiaro ho ratsy amin'izany.
Mijanona ho azo antoka.
Ampahatsiahivinao fotsiny izany fa ny mahaliana sy mahaliana dia tsy voatery hidika hoe mampidi-doza na mampidi-doza.
Mazava ho azy, manandrama fanatanjahan-tena tafahoatra raha tianao, fa alao antoka fa handray fitandremana azo antoka ianao ary miaraka amin'ny olona mahalala ny zavatra ataony.
Ny mahaliana sy mampientam-po dia tsy voatery hidika hoe mahery vaika, ary azonao atao koa ny manapoka ny fiainanao amin'ny fiononan'ny tranonao manokana.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hanampiana fientanam-po bebe kokoa amin'ny fiainanao? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
10 Tsy misy toro-hevitra momba ny Bullsh * t amin'ny fanisana isan'andro
Raha tsapanao fa mandany ny fiainanao ianao dia ataovy ireto zavatra 10 ireto
Famantarana tsy azo lavina 19 mila fanovana eo amin'ny fiainana ianao
kim kardashian sary vaovao instagram
fa maninona aho no mahatsapa azy
ahoana ny fomba hanavotana fifandraisana aorian'ny lainga
bray wyatt sy bo dallas
manambady i rob sy chyna